Kukurukurirana - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Ino inguva yeshanduko inoshamisa muindasitiri yekutaurirana. Kupfuura chero imwe indasitiri yenharembozha yanga ichitarisana nemakwikwi akawanda zuva nezuva. Kuti ugare pamberi pemakwikwi, makambani enhare anosungirwa kuisa matekinoroji azvino mumabasa avo uyezve nekukanganisa webhusaiti iyo inoratidza mabasa avo ese mumasekondi mashoma avanoshandisa pairi. Newgenapps inobatsira iwe kudaro.
Isu tiri yepasi rose "Cloud" masevhisi uye IT services kambani. Newgenapps dandemutande kuvandudza kwesarudzo miitiro inogadzirisa dzakasiyana siyana bhizinesi zvinodiwa uye mafambiro ekugadzirisa. Isu tinovaka yakagadziriswa webhu yakavakirwa uye Mobile mafomu izvo zvine hunyanzvi pamwe nekusimba.
Tingabatsira sei indasitiri yeDzidzo?
Isu Tinopa akasiyana e Telecom services uye nharembozha kune vatengi vedu vanokwikwidza uye vanovapa iwo mupendero pamusoro pezvasara. Mhinduro shoma dzatinopa kune vedu vatengi veTelecom ndeiyi:
1.Mapepa ekushandisa masevhisi
3. Maturusi ekugadzirisa mashandiro
4. Kubatanidzwa neE ERP / CRM kunyorera
5. Ronga kushanyira kwevatengesi
6. Tora kutengesa kutengesa uchishandisa Mobile Apps
7. Cloud mhinduro AWS zvinopihwa